Enweghị ngosi nke Angi Roofing na esemokwu nke mmasị kwesịrị ịdọrọ uche ụfọdụ | Martech Zone
Enweghị mkpughe nke Angi Roofing na esemokwu nke mmasị kwesịrị ịdọrọ uche ụfọdụ
Ndị na-agụ akwụkwọ m nwere ike ịghọta na anyị enyerela ọtụtụ ụlọ ọrụ mkpuchi ụlọ aka iwulite ọnụnọ ha n'ịntanetị, na-achọ ọchụchọ mpaghara ha, ma na-anya ụgbọ ala maka azụmahịa ha. Ị nwekwara ike icheta na Angi (nke bụbu Angie's List) bụ onye ahịa bụ isi nke anyị nyere aka na njikarịcha search engine ha na mpaghara. Laa azụ n'oge ahụ, ihe a na-elekwasị anya n'azụmahịa ahụ bụ na-eme ka ndị na-azụ ahịa jiri sistemụ ha kọọ akụkọ, nyochaa, ma ọ bụ chọta ọrụ. Enwere m nkwanye ùgwù dị egwu maka azụmahịa na ndị malitere - anyị nyeere ha aka ịzụlite azụmahịa ha nke ukwuu.
N'ime ihe karịrị afọ 18, Angie's List egosibeghị uru ọ na-enweta kwa afọ, ndị nyocha chere na ọnụ ahịa ụlọ ọrụ ahụ bụ ihe ezi uche na-adịghị na ya. Na 2017, Angi gbanwere site na azụmahịa ndenye aha ndị ahịa gaa na ọgbọ-ọgbọ maka ụlọ ọrụ edepụtara na nyocha ha. Na 2021, ha degharịrị aha, megharịa webụsaịtị ha, wee wepụta ngwa ọhụrụ na-atụ anya ịbanye n'ụlọ ọrụ ọrụ ụlọ n'ihu. Obi abụọ adịghị ya na enwere ohere ịnweta ego n'ọgbọ ndu karịa na azụmahịa ndenye aha dị larịị nke toro akara Angi nke ukwuu.
Mana ekwenyere m na ha gara oke oke.
Nsogbu na-eto eto na ndu adịgboroja
Otu n'ime obodo m Indianapolis ụlọ elu na-emefu ezigbo ego na nkwekọrịta kwa afọ na Angi ịkwọ ụgbọala na-eduga n'ahịa ya. Mụ na Bob na azụmahịa ezinụlọ ya na-arụkọ ọrụ ruo ọtụtụ afọ, ọ bụkwa ezigbo enyi ọbụna tupu mgbe ahụ. Na nso nso a, Bob chọpụtara na ọ na-abawanye ụba ndu adịgboroja site na Angi… na ezigbo ụzọ na nnukwu ọrụ malitere iji nwayọọ. Agaghị m ekpughe nkwa nke Bob na Angi kwa ọnwa, mana enwere m ike ịgwa gị na ọ bụ nkwekọrịta nwere oke. N'ime ọnwa atọ, ọ natara ụzọ adịgboroja 72 - nke ọ bụla na-ewepụ uche na azụmahịa ya.
Bob malitere ịgwa m okwu gbasara ya ma gbalịa ịkasa Angi mkpesa… mana anụghị mkpesa ya. Ọ chọpụtara na ndị nnọchi anya ya malitekwara ịtụgharị ugboro ugboro, na-agbakwunye na nkụda mmụọ ya. Ihe ndị a niile n'oge ohere ịsa ụlọ na nke siding na-arị elu na mmụba ọrụ ụlọ metụtara ọrịa a.
Mkpesa azụmahịa Angi
Ewubere Ndepụta Angie n'okwu ọnụ na etiti Indiana ma bụrụ akara a hụrụ n'anya site n'ezinaụlọ ndị jiri ya were were were were were were were were were were were were were were were were were were were were were were were were were were were were were were were were were were were were were were were were were were were were were were were were were were were were were were were were were were were were were were were were were were were were were were were were were n'ọrụ. M zutere na osisi multiple ugboro na ha nnọọ ghọtara ihe ha na-ere ọha na eze bụ tụkwasị obi… nnukwu nsogbu na ụlọ ọrụ ọrụ ụlọ.
N'ezie, enwere m otu nkwekọrịta dị ịrịba ama na Angie's List tupu ha aga n'ihu ọha naanị ka ha rụọ ọrụ nyocha nke ụlọ ọrụ merela ha iji hụ na ihe niile dị na elu. Ndị isi ụlọ ọrụ ha etinyeghị ihe ọ bụla nwere ike imebi akara ha ma ọ bụ tinye ndị ahịa ha n'ihe egwu.
Ekwetaghị m na nke ahụ bụ ihe nzukọ a na-elekwasị anya. Ma ọ na-enwe mmetụta dị egwu.
N'ezie, na February nke 2022, ndị Better Business Bureau wepụrụ nzere Angi n'ihi ọdịda nke azụmahịa ahụ na-agbaso n'iwu BBB chọrọ ka ụlọ ọrụ acredited na-ezute ma rube isi n'ụkpụrụ ụfọdụ.
Ahịhịa ikpeazụ: Angi Roofing
Isnye bụ onye na-ahụ maka ụlọ a na-enyochakarị nwere nnukwu nyocha na Angi na mpaghara mpaghara ụfọdụ? O nwere ike iju gị anya ịchọpụta na ọ bụ ya Angi Roofing.
Ka Bob nọ na-ewepụta nkọwa na iso ndị ahịa nwere nzukọ, were ya na ọ tụrụ ya n'anya ịchọpụta na ụlọ ọrụ ọ na-akwụ ụgwọ maka ndị ndu so ya na-asọmpi ozugbo. Nke ahụ ziri ezi… Angi na-enweta na-eduga roofing ụlọ ọrụ na ụfọdụ geographies na-akwọ ụgbọala na-eduga ozugbo n'ime ha onwe ha ụlọ ọrụ.
Dabere na Motley Fool, nke a malitere n'afọ gara aga.
Hanrahan kwuru na azụmahịa ahụ, nke a na-akpọ ugbu a dị ka Angi Roofing, na-eto ngwa ngwa, dịlarị n'ahịa iri na abụọ, na n'oge na-adịghị anya ga-abụ na ise ọzọ. Roofing nwere ọtụtụ àgwà ndị na-arụ ọrụ na ihu ọma ụlọ ọrụ na otu ụdị, gụnyere ọnụ ahịa dị elu dị elu na nnukwu ahịa ahịa, nke ọ na-eme atụmatụ na $ 50 ijeri.
Ikwuwapụta na onye ahịa m dị ndụ nwere ike ịbụ okwu ekwesighi. Ọ dịghị mgbe Angi kpọtụụrụ ya ma gwa ya banyere ihe ha nwetara, ọ dịghị mgbe ọ gwara ya na ha na-anya ụgbọ ala na-azụ ahịa nke ha, ọ dịghịkwa mgbe ọ gwara ya na ọ ga-abụ na ọ na-enweta ihe fọdụrụnụ. Bob gbasoro ndụmọdụ gbasara iwu ma na-achọ ka ọ pụọ ozugbo na nkwekọrịta ya na Angi.
Mee nyocha n'obodo ụfọdụ dị n'etiti etiti ọdịda anyanwụ na Google Maps, ị ga-ahụ na Angi na-amalite iweghara ngwugwu maapụ mpaghara ma na-akwalite. Angi Roofing. Ma, n'ezie, ha na-akwalite azụmahịa ndị a dị ka ndị onye na-ahụ maka ụlọ a na-enyochakarị si ebe ahụ… ọma duh… ya mere ị zụtara ha.
Ebee ka Federal Trade Commission dị?
Nleba anya ngwa ngwa na saịtị Angi ị gaghị ahụ nke ọ bụla ngosi pụtara ìhè nke mmekọrịta ego a. Ọ bụrụ na m nwere mmekọrịta okirikiri ebe m na-egosi ndị na-azụ ahịa na m bụ onye a pụrụ ịtụkwasị obi na-eme ihe na-enye nyocha nke azụmahịa nke onwe ya ... .
Ị gaghị ahụ ụdị mkpughe ọ bụla na ibe ụlọ Angi ma ọ bụ nke ha Achọ ụlọ:
Ya mere, mba kasị ukwuu influencer na ụlọ ọrụ na-adịghị conspicuously ikpughe na-eji ọkụ na ọ na-anya ụgbọ ala na-eduga ha azụmahịa nke ha, ọ bụghị ikpughe ha azụmahịa ahịa na ha na-adịghị mpi ha, na ọ dịghị onye ọbụna na-ajụ ajụjụ a?
Nke a bụ ihe a na-apụghị ikweta ekweta.
Mana Ọ bụ Iwu Na-akwadoghị?
Anaghị m ebubo na Angi mere ihe ọ bụla megidere iwu ebe a. Naanị m na-ebute nke a na onye ọ bụla ma ekwenyere m na mgbasa ozi na FTC kwesịrị ileba anya nke ọma na nke a. N'elu ya, ọ bụ echiche m na nke a bụ mgbasa ozi aghụghọ. Opekempe, ekwenyere m na enweghị mkpughe na-egosi oke ikpe nke ụlọ ọrụ ahụ.
Enweghị m ike ịtụkwasị obi a saịtị nyocha ebe m kwenyere na m na-enweta ndụmọdụ akụrụngwa nke onwe - iji chọpụta na ụlọ ọrụ akwadoro Angi n'onwe ya. Na dị ka onye na-eweta ọrụ, Agaghị m akwụ ụgwọ maka ndị na-eso ụzọ m ozugbo!
Tags: Angi reviewsangi roofingangi roofing cincinnatiangi roofing indianapolisangieNdepụta AngieBBBngosi ngosiọrụ ụlọedu ọgbọNyochatụkwasị obiNtụle tụkwasịrị obi
Kọmpas: Ngwá Ọrụ Nkwalite Ọrịre Ịre Ịkwụ Ụgwọ Kwa Pịa Ọrụ Ịre ahịa
Ihe nkuzi 5 Amụtara Site na Ihe karịrị nde 30 mmekọrịta ndị ahịa otu na otu na 2021
Jun 20, 2022 na 6: 35 PM
Chaị! Nke ahụ dị nzuzu! Ọ bụ nnọọ njem ahụ e mere site na mmalite nke “Angie” gaa na omume azụmahịa nke “Angi” ugbu a. Ọ bụ ezie na ọ bụghị otu ihe ahụ, ọ na-echetara m ụfọdụ omume azụmahịa sitere na Amazon. Mgbasawanye ha n'ime ọ bụghị naanị onye na-eweta "ahịa" maka ụlọ ọrụ kamakwa ịghọ onye na-ere ngwaahịa nke ha n'ahịa ha na-achịkwa nke ọma na ọ dịghị mgbe ọ dị ka ogige egwuregwu n'ụzọ ọ bụla ma ọ bụ echiche ị nwere ike iche n'onwe gị.